आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न संविधानसभा बैठक आज – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१९ चैत्र २०७६, बुधबार २३:२९ English
आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न संविधानसभा बैठक आज
काठमाडौ, १२ चैत । राज्यपुनर्संरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको बारेमा छलफल गर्न संविधानसभाको बैठक आज बस्दै छ । संविधानसभा भवन नयाँवानेश्वरमा दिउँसो ३ बजेपछि सुरु हुने बैठकमा आज संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले राज्यपुनर्संरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदन टेवल गर्ने कार्यक्रम छ । सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको बारेमा भने भोलिदेखि मात्र छलफल सुरु हुने संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । यसअघि संविधानसभाध्यक्ष नेम्वाङले अस्ति संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचना समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गर्नु भएको थियो । सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै दुई महिनापछि संविधानसभामा छलफल हुन लागेको हो । संविधानसभा नियमावलीमा सहमति जुटन नसक्दा आयोगको प्रतिवेदनमाथी छलफलमा ढिला भएको हो । आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वाबुराम भट्टराईले माघ १९ गते संविधानसभाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । राज्यपुनर्संरचना सुझाव आयोगले अल्पमत र बहुमतका दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन माघ १६ मा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । आयोग संयोजक मदन परियारसहितका बहुमत सदस्यले ११ र डा रमेश ढुङ्गेलसहितका तीन सदस्यले ६ प्रदेशको खाका सहित प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
यसैबीच संविधानसभा कार्यव्यबस्था परामर्श समितिको बैठकपनि आज दिउँसो बस्दैछ । संविधानसभा भवनमा दिउसो एक बजे बस्ने बैठकले संवैधानिक समितिलाई सहमतिका लागि थप समय लपलव्ध गराउने निर्णय गर्ने एमाले सभासद उषाकला राईले जानकारी दिनुभयो । संवैधानिक समितिको अस्ति बसेको बैठकले राजनीतिक सहमतिका लागि ५ दिनको समय माग्ने निर्णय गरेको थियो ।
१२ चैत्र २०६८, आईतवार ०९:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ प्रशासनबाट सवारी पास वितरण बन्द	१९ चैत्र २०७६, बुधबार १९:४८
११ सय बढीको कोरोना परीक्षण, ९९ जना आईसोलेसनमा	१९ चैत्र २०७६, बुधबार १९:४५
मजदूर बोकेर रामेछाप हिडेको पिकअप भ्यान दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु	१८ चैत्र २०७६, मंगलवार १२:५०
लकडाउनका बेला २ युवकलाई कुट्ने प्रहरी निलम्बित	१८ चैत्र २०७६, मंगलवार १२:४८
केलालीमा विस्फोट, एक जनाको मृत्यु	९ चैत्र २०७६, आईतवार १३:३१
कोरोना भाइरसबारे गलत हल्ल फैलाउनेलाई कस्तो कारबाही होला ?	९ चैत्र २०७६, आईतवार १०:२३
विवादित बनेको कम्पनीसँग स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता रद्द, धरौटी जफत
१९ चैत्र २०७६, बुधबार १९:३८